फर्नान्डोको शतकसँगै श्रीलंकाद्वारा वेस्ट इण्डिजलाई ३३९ रनको लक्ष्य प्रस्तुत
scheduleसोमवार जेष्ठ १२ गते, २०७७
एजेन्सी, १६ असार । आईसीसी एकदिवसिय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा वेस्टइन्डिजविरुद्ध श्रीलंकाले ३३९ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।
रिभरसाइड ग्राउण्डमा जारी सिजनको ३९औं खेलमा वेस्टइण्डिजले टस जितेर श्रीलंकालाई ब्याटिङको निम्ता दिएको थियो । श्रीलंकाले निर्धारित ५० ओभरमा ६ विकेटको क्षतिसहित ३३८ रन जोडेको हो ।
श्रीलंकालाई विशाल रन जोड्नेक्रममा अविष्का फर्नान्डोले आफ्नो वनडे करिअरको पहिलो शतक लगाए । यो विश्वकपमा शतक लगाउने श्रीलंकन टिमको उनी पहिलो ब्याट्सम्यान बनेका छन् । फर्नान्डो १०३ बलमा ९ चौका र २ छक्कासहित १०४ रन जोडेर आउट भए ।
श्रीलंकाका लागि एन्जेलो म्याथ्यूजले २६ रन बनाए । उनलाई जेसन होल्डरले बोल्ड गरे । म्याथ्युजले अविष्कासँग ५८ रनको साझेदारी गरे ।
त्यसैगरी कुसल परेरा ६३ रन बनाएर आउट भए । उनले जारी विश्वकपमा आफ्नो तेस्रो अर्थशतक पूरा गरे । कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ३२ रन बनाएर जेस होल्डरकै बलमा आउट भए । दिमुथले परेरासँग पहिलो विकेटका लागि ९३ रनको साझेदारी गरे । कुसल मेन्डिस ३९ रन बनाएर फैबियन एलेनको बलमा आउट भए । उनले अविष्कासँग ८५ रनको साझेदारी गरे ।
इसुरु उडाना ३ रनसहित आउट भए । उनलाई होल्डरले थोमसको हातबाट क्याच गराएका हुन् । लाहिरु थिरीमानेले ३३ बलमा ४ चौकासहित ४५ रन जोड्दै अविजित रहे भने धनञ्जय सिल्भा भने ३ बलमा १ चौकासहित ६ रन जोडेर अविजित रहे ।
वेस्ट इण्डिजको लागि जेसन होल्डरले २ विकेट लिए भने फेबियन एलेन, ओसेन थोमस, शेल्डन कोट्रेलले समान १/१ विकेट लिए ।
आजको खेलमा वेस्ट इन्डिजले केमर रोचको स्थानमा शैनन गेब्रियललाई मौका दिएको छ । त्यसैगरी श्रीलंकाले भने तीन खेलाडी परिवर्तन गरेको छ ।
वेस्टइन्डिज सेमिफाइनलको दौडबाट बाहिरिइसकेको छ। ७ खेलमा १ मा जित र ५ मा हारसहित साथ नवौं स्थानमा रहँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेकोले
आजको खेलमा वेस्ट इण्डिजको लागि केवल प्रतिष्ठाको लागि मैदनमा उत्रनेछ । ऊ आज कुनै दबावबिना मैदानमा उत्रनेछ ।
श्रीलंकाको पनि अघिल्लो चरण पुग्ने सम्भावना लगभग सकिएको पनि ऊसँग झिनो आशा भने बाँकी छ । आजको खेलमा पराजित हुँदा भने श्रृलंका आधिकारिकरुपमा प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेछ । श्रीलंका ७ खेलमा २ मा जित र ३ मा हारका साथ सातौं स्थानमा छ । २ खेल वर्षाले रद्द भएको श्रीलंकाको ६ अंक छ ।
अहिलेसम्म विश्वकपमा श्रीलंका र वेस्ट इन्डिजबीच भएको ८ खेलमा वेस्ट इन्डिज ४ खेलमा विजयी हुँदा ३ खेलमा पराजित भएको थियो । १ खेलको नतिजाविहीन छ ।
त्यसैगरी यी दुईदेशबीच कुल ५६ वान डे खेल भएको छ । वेस्ट इन्डिज २८ खेलमा विजयी हुँदा २५ खेलमा पराजित भएको छ भने ३ खेल नतिजाबिहीन छ ।
श्रीलंका- दिमुथ करुणारत्ने(कप्तान), कुशल परेरा, अविष्का फ्रनान्डो, कुशल मेन्डिस, एन्जिलो मेथ्युज, लहिरु थिरिमने, धनञ्जय डी शिल्भा, इसुरु उडना, जेफरी वान्डरसे, कसुन राजिथ र लाथिस मलिंगा
वेस्ट इन्डिज– क्रिस गेल, सुनिल एम्ब्रिस, शाई होप, निकोलस पुरन, शिमरोन हिटमायर, जोसन होल्डर, कार्लोसवर्थवेट, फबिएन एलिन, शैनन गेब्रियल, शिल्डन कर्टेल र ओशन थोमस ।
फिलिपिन्हो कोटिन्हो आर्सनल आउन सक्ने !
हल सिटीका दुई जना खेलाडी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित
साल्केको नमिठो हार
एडामा ट्रोय किन्ने तयारीमा लिभरपुल
प्रिमियर लिगः दुई क्लबका दुई जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित
वायर्न म्युनिखले फ्रान्कफर्टविरुद्ध पाँच गोल हान्यो
मार्च महिनादेखि स्थगित रहेको ला लिगा जुन ८ बाट सुचारु हुने
आगामी जुनबाट क्रिकेट सुचारु गर्ने तयारीमा श्रीलंका
बर्लिन ‘डर्वी’मा हर्था बर्लिनको फराकिलो जित
सिमेडोलाई अनुबन्ध गर्न यी क्लबहरुले देखाए चासो
‘म बार्सिलोनामा नै खुसी छु’
जर्मन क्लबका थप दुई जना खेलाडी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित
सामाजिक दुरी कायम गरेर लिभरपुलका खेलाडीहरुले सुरु गरे ट्रेनिङ
बायर्न म्युनिखसँग गोलरक्षक म्यानुयल नुयरले गरे नयाँ सम्झौता
सिरी ए का खेलहरु अगस्ट २० भित्र सक्नुपर्ने !
वाट्फोर्डका खेलाडी एड्रियन मारियापा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित
यी खेलाडीलाई अनुबन्ध गर्न प्रिमियर लिगका तीन क्लबहरुबीच प्रतिस्पर्धा
इडिसन काभानीलाई अनुबन्ध गर्ने तयारीमा इन्टर मिलान !
‘कोउटिन्होबारे अझै निर्णय हुन सकेन’
प्रिमियर लिग: ६ जना खेलाडी तथा खेल पदाधिकारी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको साइट ह्याक
काठमाडाैं,११ जेठ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको साइट ह्याक भएको छ । भारतीय ह्याकरले साइट कब्जा गरेका छन् । भारतीय ह्याकरले...
काठमाडौँको टोखामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु
काठमाडौँ, ११ जेठ । काठमाडौँको टोखा नगरपालिका–२ पञ्चेटारमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा...
बागलुङका चार स्थानीय तह सिल
रामबहादुर थापा/बागलुङ, ११ जेठ । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम हुन नदिन आजदेखि जिल्लाका चार स्थानीय तह सिल गरिएको छ । बडिगाड, निसीखोला,...
खोरको छानाले च्यापिएर दुईजनाको मृत्यु
सांकेतिक तस्बिर ११ जेठ, चितवन । चितवनको नवलपुर गैंडाकोटमा कुखुराको खोरको छानाले च्यापिएर दुईजनाको मृत्यु भएको छ । हावाहुरीसहित...
अमेरिकाः एक दिनमै ११२७ नागरिकको मृत्यू, गल्फ खेल्दै राष्ट्रपति ट्रम्प
वासिङ्गटन, ११ जेठ । अमेरिकामा कोरोना महामारीका कारण ९८ हजार ६८३ मानिसको मृत्यू भएको छ । अमेरिकाको सबैभन्दा प्रभावित न्यूयोर्कमा...
काठमाडौँ, १२ जेठ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल भारतको पश्चिम बंगाल र बंगलादेशको आसपासमा निम्न चापीय प्रणाली रहेको...
उहान ल्याबका प्रमुख भन्छन् – हाम्रो प्रयोगशालाबाट भाइरस बाहिरिएको छैन
फाइल फोटो न्यूयोर्क, ११ जेठ । कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारी मध्य चीनको उहान इन्स्टिच्यूट अफ भाइरोलोजीबाट प्रारम्भ...
बाँकेको नरैनापुरमा निषेधाज्ञा जारी, सेना परिचालन
नेपालगन्ज, ११ जेठ । बाँकेको नरैनापुरमा निषेधाज्ञा गरिएको छ । निषेधित क्षेत्रमा नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ। आइतबार राति...